Mashandisiro atinoita makuki uye akafanana matekinoroji | Matanho
Kushandiswa kweKuki uye Akafanana Technologies
Yedu masevhisi anoshandisa makuki uye akafanana matekinoroji, senge mapikisheni uye yekuchengetera kwenzvimbo kuitira kuti ruzivo rwako ruve nyore, nekukurumidza, uye nekuchengeteka. Hedzino dzimwe nzira nzira masevhisi edu anoshandisa aya matekinoroji, senge mawebhusaiti, SMS, APIs, email ziviso, maapplication, mabhatani, majeti, uye kushambadza: kusaina muAvalanches, chengetedza zvaunofarira, gadzira zvemukati zvemukati, chengetedza kurwisa spam, nekushungurudzwa, uye ratidza ma ads anoenderana nezvaunofarira.
Tevere, isu ticha tsanangura mashandisiro anoita Avalanches, vatinoshanda navo, uye wechitatu-bato makambani anoshandisa aya matekinoroji, pamwe neyakavanzika marongero uye zvimwe zvinhu zviripo.
Zvinoreva maKuki, Pixels, uye Yemunharaunda Kuchengeta
Cookies mafaera madiki anoiswa mawebhusaiti pakombuta yako paunotarisa pawebhu. Kufanana nemamwe mawebhusaiti, Avalanches inoshandisa makuki kudzidza mashandisiro anoita vanhu sevhisi yedu uye nekuvandudza ruzivo rwavo.
Iyo pikisi idiki shoma rekodhi pawebhu peji kana mune email ziviso. Kufanana nemamwe masevhisi mazhinji, isu tinoshandisa mapikisheni kuti tione kana iwe wakabatana nezvimwe zvakasarudzika zviri pawebhusaiti kana email. Izvi zvinotibatsira kuyera nekuvandudza masevhisi edu uye kugadzirisa ruzivo rwako.
Yemunharaunda yekuchengetera ndeye tekinoroji tekinoroji iyo inobvumidza webhusaiti kana app kuti ichengete ruzivo munharaunda imomo pakombuta yako kana nhare mbozha. Isu tinoshandisa chengetedzo yemuno kugadzirisa izvo zvatinokuratidza zvinoenderana nekubatana kwako kwekare nemasevhisi edu.
Sei tichishandisa matekinoroji aya?
Isu tinoshandisa aya matekinoroji kununura, kuyera, nekuvandudza masevhisi edu nenzira dzakasiyana siyana. Aya matekinoroji anowanzo shandiswa muzvikamu zvinotevera zvezviitiko.
Kuongorora kwechokwadi uye chengetedzo:
Kutema matanda kuAvalanches
Kuvimbisa kuchengetedzeka kwako.
Kuona zvemukati nezvirambidzo zvekuparadzira.
Kutsvaga nekubvisa spam, kutuka, uye zvimwe zviitiko zvinotyora Avalanches Nharaunda Mitemo.
Semuenzaniso, aya matekinoroji anobatsira kuratidza kupinda kweAvalanches uye kudzivirira kupinda kusingatenderwe kuaccount yako. Ivo vanotibvumidzawo kukuratidza iwe zvemukati zvinoenderana nezvako zvaunofarira mumasevhisi edu.
Chengetedza ruzivo nezve browser rako uye zvaunofarira.
Semuenzaniso, tinoshandisa kuki kuti tirangarire mutauro waunofarira kana nyika yauri. Nenzira iyoyo tinokwanisa kuratidza zvirimo mumutauro waunoda tisingabvunze iwe pese paunoshanyira Avalanches. PaAvalanches, tinokwanisa zvakare kugadzirisa zvirimo zvichienderana nenyika, sekuratidza misoro inoenderana nenyika kana kuvharira kuwana zvimwe zvirimo zvichibva pamitemo yenyika. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve akakodzera misoro uye zvemukati zvinorambidzwa mune imwe nyika.
Iko kugona kwekunzwisisa mashandisiro anoita vanhu masevhisi edu, kusanganisira maAvalanches mabhatani uye majeti kuti zvivandudze.
Semuenzaniso, makuki anotibatsira kuyedza akasiyana mavhezheni edu masevhisi kuti tinzwisise izvo maficha kana zvemukati vashandisi vanofarira. Tinogona zvakare kukwidziridza nekuvandudza Avalanches nekushandisa makuki kuti tinzwisise mashandiro aunoita nemasevhisi edu, sekuti unoashandisa nguvai uye kangani uye ndeapi anobatanidza aunobaya. Yekuwedzera ruzivo nezve makuki aungangosangana nawo maererano nekushandisa kwedu kweGoogle Analytics. Isu tinogona zvakare kushandisa makuki kuverenga huwandu hwevashandisi vakatarisa yakadzamidzirwa tweet kana feed.
Iko kugona kwekugadzirisa masevhisi edu kukuratidza zvirinani zvirimo, senge misoro yemunhu inoenderana, nyaya, kushambadza, uye kurudziro.
Semuenzaniso, yekuchengetera kwenzvimbo kunotitaurira kuti ndezvipi zvikamu zveAvalanches yako feeds iwe yawakatotarisa kuti tikuratidze zvemukati zvitsva. Cookies anotibatsira kunyatso kurudzira vashandisi iwe ungangodaro unakirwe nekuverenga zvichibva pakubhurawuza kwako mawebhusaiti.
Kuita kwako pamidziyo yakasiyana:
Nekuwana yakawanda data nezve kuenderana kwekushandisa, tinokwanisa kushandisa ruzivo kubva kuchimwe chishandiso kugadzirisa maAvalanches pane chimwe chishandiso.
Paunopinda maAvalanches pane yako kifaa, tinobatanidza chishandiso icho kuakaunzi yako yeAvalanches. Kunyangwe iwe kana kuti kwete iwe wakapinda maAvalanches, isu tinogona zvakare kugamuchira ruzivo nezve ako zvishandiso mune anotevera kesi (runyorwa haruna kukwana): mubatanidzwa watipa isu neruzivo urwu; iwe wawana avalanches.com; iwe wawana yechitatu-bato saiti iyo inoshandisa yakadzamidzirwa Avalanches zvemukati. Tinogona kushandisa ruzivo urwu (kazhinji kero dzeIP uye nguva yekutambira) kubatanidza zvishandiso zvakasiyana, kusanganisira izvo zvawakapinda maAvalanches.
Aya matekinoroji anoshandiswa kupi?
Isu (pamwe chete nevechitatu mapato) tinoshandisa matekinoroji aya pamawebhusaiti edu, mune edu mashandiro uye masevhisi, uye kune mamwe mawebhusaiti, mune mamwe mashandiro uye masevhisi akabatanidzwa nemasevhisi edu (kusanganisira echitatu-bato nzvimbo dzinoshandisa tekinoroji yedu yekushambadzira). Vatatu vanogona zvakare kushandisa aya matekinoroji, semuenzaniso, kana iwe ukabaya pane zvinongedzo pane edu mawebhusaiti kana kunyorera, tarisa kana kuyanana nevechitatu-bato zvemukati sechikamu chebasa redu, uye shanyira echitatu-bato mawebhusaiti anoshandisa yedu yekushambadzira tekinoroji.